Ungangisiza ukuthi ngiqonde amagama angukhiye e-Amazon ngamathiphu namasu?
Ngaphambi kwanoma yini enye, ake siqale ngezincazelo eziyisisekelo kanye nemigomo eyinhloko mayelana namagama angukhiye e-Amazon, alandelwe ngamasu kanye nezincomo ezisebenzayo ezivela ohlwini lobuchwepheshe. Ngakho-ke, yini eyenza ucwaningo lwegama elingukhiye, ikakhulukazi kusukela ekubambeni kwebhizinisi lokuthumelela ukuhambisa phansi kanye nomqondo wanamuhla wokuhweba kwe-ecommerce othathwe ngesilinganiso? Ukuhlelwa kokufakwa komkhiqizo we-Amazon kanye nokucwaninga kwegama elingukhiye okudingekayo ukuqedela umsebenzi kuvame ukuhloswe ukuba kube inqubo ebanzi yokuhlola nokuhlola okuhloswe ukuqoqa amagama angukhiye afanele kanye nemishwana emide ende esetshenziselwa abathengi bukhoma okwenza usesho lomkhiqizo (isibonelo, igama lomkhiqizo, umkhiqizo, isihloko, noma isigaba sento).
Kodwa kungenzeka yini wonke lawo magama aseshayo nemishwana mayelana nomkhiqizo othile ozotholakala endaweni eyodwa? Kungenzeka usuqagele ukuthi cha, akunjalo. Futhi kusho ukuthi naphezu kokuthi kukhona amathuluzi amaningi okucwaninga ngegama elingukhiye atholakalayo kuwebhu, akusikho isikhathi esiningi esisele ukuba usetshenziswe enkambweni yocwaningo nokufakwa ohlwini kokuhlelwa. Futhi nakhu lapho ezinye izincomo ezisebenzayo mayelana namagama angukhiye e-Amazon kanye namathiphu okufakwa ohlwini aqala ukudlala - eleaf is tick 150w box. Ngezansi ngizokukhombisa umhlahlandlela omfushane wokugcina konke kuvele kucace.
Ukuhlelwa Kokuhlelwa Kwemikhiqizo ku-Amazon kanye namathiphu Amagama angukhiye
Nazi ezinye izinhlelo zokuzama ukuzisebenzisa futhi zamaqiniso kumazwi we-Amazon namathiphu okuzokusiza ngalokhu. Njengoba unikezele ukuthi uphikelela ngokwanele ukuba udlulise uhlelo lokucwaninga ngegama elingukhiye (ngokuqondisisa okuncintisana namathuba okuthengisa umkhiqizo wokufuna), ngokuqinisekile uzothola okufunayo. Ngisho ukuthi kunezinhlobonhlobo ezinkulu zamagama athize kanye nemisho emifushane yokucinga - elinde nje ukuba lisetshenziselwe ukukhomba okungcono, inqubekela phambili ephezulu yokwenza, nokuguqulwa okukhulu. Konke kulula kakhulu - uma umkhiqizo wakho osondelene uqhathanisa nokulindela kwangempela kwe-shopper ngaphesheya, amaklayenti angase akwazi ukuguqulwa abe ngabathengi bakho.
Isinyathelo sokuqala: Qalisa Ngethuluzi Elifanele
Yiqiniso, akukho thuluzi eliphelele ukunikeza ngokushesha amagama angukhiye ama-Amazon noma noma yimaphi amathiphu okukuqinisekisa ukuthi yimiphi imiphumela esheshayo futhi elinganiselwe..Noma kunjalo, ukuqala ngezizathu ezisemqoka kakhulu nokuhlola i-Google Name Keyword Planner cishe kuyisixazululo esihle kakhulu se-kickstart ukuze ubone uhlu lwamanje lokusesha futhi ulungise uhlu oluyinhloko lwamagama angukhiye athandwa kakhulu kanye nemishwana yokusesha esetshenziswa abantu ku-Google ukuthola okudingayo kuwo wonke umuntu phezu kwezwe. Ukwenza kanjalo, isinyathelo sakho esilandelayo ukudonsa konke ndawonye futhi ugcine kuphela lawo magama angukhiye ekugcineni azosiza uhlu lwakho.
Isinyathelo Sokubili: Hlola Ukuthenga Okungokoqobo Kwamathenda
Phakathi kwazo zonke ezinye izici zokucwaninga kwamakhompiyutha nokulandelela okutholakala manje, ngincoma ukuthatha enye ukulandela abasizi be-intanethi ukuthola izingoko zokusesha zangempela - kokubili ku-Amazon, nezinye izindawo ezimakethe ezivame ukufaka uhlu olubonakalayo lwemikhiqizo nokusebenzisa izixazululo ezithuthukisiwe (futhi, ezinye iziteji ezithandwa kakhulu, ezifana ne-eBay, Alibaba, i-Walmart, njll). Ngakho, sekuyisikhathi sokuqala ukuhlola amathuba akho wesigaba somkhiqizo we-niche kanye nemikhiqizo yamazwi angukhiye we-Amazon futhi uthole amathiphu ngeziphakamiso ezibalulekile ezifanelwe wena ngqo. Zizwa ukhululekile ukuzama enye yalezi zixhobo zokulandelela namafutha okugcwele: I-KeywordInspector, Ububanzi, Amagama Omthengisi, kanye neScientific Seller. Zonke ziyizikhombisi ze-intanethi ezisebenzisekayo noma amathuluzi esofthiwe aklanyelwe ukukunikeza isithombe esigcwele samazwi angukhiye e-Amazon, amathiphu asebenzayo, neziphakamiso zangempela zesikhathi sangempela - ukudonsa ngqo kusuka kusesho lokudubula bukhoma, noma ukubamba ngokuqondile kubathengisi abahamba phambili abathengisa isigaba.